AUKEY PA-B1 20Watt Omnia Mini Charger for iPhone 12 – Gadget Pro Myanmar
Product SKU: AUKEY PA-B1 White
ကမ္ဘာကြီး ကို ကယ်တင်လိုတဲ့ APPLE ရဲ့ စေတနာကြောင့် iPhone 12 ဝယ်ပြီး ဘယ်အားသွင်းခေါင်းနဲ့ သွင်းရမလဲ ခေါင်းခြောက်နေပြီလား?
iPhone 12 က စ ပြီး APPLE Products အများစုမှာ အားသွင်းခေါင်း (charger) ပါဝင်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Carbon footprint ကို လျော့ချပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖို့အတွက်လို့ APPLE က ဆိုပါတယ်။ ဒါကို တစ်ချို့ လက်ခံနိုင်ကြသလို၊ တစ်ချို့လည်း APPLE အမြတ်ကြီးစားချင်လို့ လုပ်တယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော APPLE ရဲ့ Keynote မှာ ချပြသွားတဲ့ data အရကြည့်ရင်တော့ မှန်ကန်တာကို လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်။ ဖုန်းရောင်းစျေးလေးပါ ဒီ့ထက် လျော့ရောင်းပေးရင်တော့ ပိုကောင်းသွားမှာပါ။
အနာဂတ်မှာ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်တဲ့ ကိစ္စ ခဏ ထားပြီး၊ လောလောဆယ် ခုမှ iPhone စကိုင်ပါမယ် ဆိုမှ၊ အားသွင်းခေါင်းမရှိလို့ အားသွင်းမရဖြစ်နေမယ့် မိမိဖာသာ မိမိ အရင် ကယ်တင်ဖို့ စဥ်းစားရပါမယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကို တည့်တည့်ရှုကြရအောင်ဗျာ။
AUKEY ရဲ့ ကယ်တင်ရှင် တစ်ဦး နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကတော့ PA-B1 Model 20Watt Omnia Mini Charger လေး ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone 12 နဲ့အတူထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အားသွင်းကြိုးတွေက C to Lightning ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် သင်ဝယ်ယူမယ့် Charger ခေါင်းမှာ USB C ပေါက်ဖြစ်မှ တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
iPhone 12 ရဲ့ Fast Charging Standard က 20 Watt လို့ APPLE ကဆိုပါတယ်။ Power Rating အနေနဲ့ (9V * 2.22A) ဖြစ်ပါတယ်။ 20 Watt ဖြစ်ပြီး အဲ့ Power Rating မမှန်ရင် fast charging အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ AUKEY PA-B1 Mini Charger လေးက iPhone 12 တွေ အတွက် Optimize ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် Original 20 Watt Fast Charger အတိုင်း အားသွင်းမြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
APPLE က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Third party accessories brands တွေကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့ APPLE က ပြောထားပါတယ်။ AUKEY က အဆိုပါ Brands တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
APPLE Original Charger ဝယ်မယ့်စျေးနှုန်းထက် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာပါမယ်။ Original Charger ထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုသေးငယ်တဲ့အတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသလို၊ ပလပ်ပေါက် နေရာယူမှု သက်သာပါတယ်။ Original လိုက်ရှာပြီး၊ အတုအစစ်ခွဲရခက်တဲ့ ဒုက္ခက ကင်းဝေးပါမယ်။ Original ဖြစ်တောင် အာမခံ ပေးတဲ့ အရောင်းဆိုင် အင်မတန် နည်းပါတယ်။
AUKEY products တွေကို Asia Star Technology (AST) Co., Ltd. က တရားဝင် တင်သွင်းဖြန့်ချိတဲ့အတွက် ပစ္စည်းတိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီ sticker နဲ့ warranty card တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တရားဝင် ပစ္စည်းမှာ အာမခံ (၁၈)လ ပါဝင်ပါတယ်။ စိတ်ချလိုပါက Company ကနေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလို့ ရသလို၊ စိတ်ချရတဲ့ အပြင်dealer ဆိုင်များမှာလည်း AUKEY Myanmar page messenger chat box ကနေ မေးမြန်းပြီး သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
iPhone ဝယ်ယူထားတယ်။ ကိုယ့်မှာ Fast Charger ကောင်းကောင်း မရှိသေးဘူး။ Original ကလည်း စျေးများလွန်းတယ်၊ ဝယ်ရင် အတုမိမှာလည်း ကြောက်တယ်။ အာမခံ ပါတဲ့ APPLE ကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Brand တစ်ခုခု ထဲက ဝယ်ယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ AUKEY PA-B1 20 Watt Mini Fast Charger လေးက သင့် အတွက် ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ပါမှာ။
အဖြေကတော့ မလိုပါဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ iPhone 12 နဲ့ စမ်းသပ်ထားတဲ့ ရလာဒ်တွေအရ 20 Watt နဲ့ သွင်းသွင်း 18 Watt နဲ့ သွင်းသွင်း၊ 0-50% အားပြည့်ဖို့ ကြာချိန် မိနစ် (၃၀)က အတူတူပဲဆိုတာ တွေ့ထားပါတယ်။ 100% အထိ ပြည့်ဖို့ ကြာချိန် (၂)နာရီ လည်း တူတာကို တွေ့ထားပါတယ် ခင်ဗျ။
#Original_20_Watt_Chargerလောက်ကောင်းပါ့မလား? APPLE က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Third party accessories brands တွေကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့ APPLE က ပြောထားပါတယ်။ AUKEY က အဆိုပါ Brands တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
#PA_B1ကဘာတွေအားသာမလဲ? APPLE Original Charger ဝယ်မယ့်စျေးနှုန်းထက် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာပါမယ်။ Original Charger ထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုသေးငယ်တဲ့အတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသလို၊ ပလပ်ပေါက် နေရာယူမှု သက်သာပါတယ်။ Original လိုက်ရှာပြီး၊ အတုအစစ်ခွဲရခက်တဲ့ ဒုက္ခက ကင်းဝေးပါမယ်။ Original ဖြစ်တောင် အာမခံ ပေးတဲ့ အရောင်းဆိုင် အင်မတန် နည်းပါတယ်။
#PA_B1ကောအတုမထွက်နိုင်ဘူးလား? #အာမခံပါလား? AUKEY products တွေကို Asia Star Technology (AST) Co., Ltd. က တရားဝင် တင်သွင်းဖြန့်ချိတဲ့အတွက် ပစ္စည်းတိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီ sticker နဲ့ warranty card တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တရားဝင် ပစ္စည်းမှာ အာမခံ (၁၈)လ ပါဝင်ပါတယ်။ စိတ်ချလိုပါက Company ကနေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလို့ ရသလို၊ စိတ်ချရတဲ့ အပြင်dealer ဆိုင်များမှာလည်း AUKEY Myanmar page messenger chat box ကနေ မေးမြန်းပြီး သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
#PA_B1ကသင့်ကယ်တင်ရှင်လား? iPhone ဝယ်ယူထားတယ်။ ကိုယ့်မှာ Fast Charger ကောင်းကောင်း မရှိသေးဘူး။ Original ကလည်း စျေးများလွန်းတယ်၊ ဝယ်ရင် အတုမိမှာလည်း ကြောက်တယ်။ အာမခံ ပါတဲ့ APPLE ကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Brand တစ်ခုခု ထဲက ဝယ်ယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ AUKEY PA-B1 20 Watt Mini Fast Charger လေးက သင့် အတွက် ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ပါမှာ။
#18Watt_Chargerရှိတယ်ဆို20Watt_Chargerထပ်ဝယ်ဖို့လိုသလား? အဖြေကတော့ မလိုပါဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ iPhone 12 နဲ့ စမ်းသပ်ထားတဲ့ ရလာဒ်တွေအရ 20 Watt နဲ့ သွင်းသွင်း 18 Watt နဲ့ သွင်းသွင်း၊ 0-50% အားပြည့်ဖို့ ကြာချိန် မိနစ် (၃၀)က အတူတူပဲဆိုတာ တွေ့ထားပါတယ်။ 100% အထိ ပြည့်ဖို့ ကြာချိန် (၂)နာရီ လည်း တူတာကို တွေ့ထားပါတယ် ခင်ဗျ။
Broad Compatibility: Fast charging works with PD and Quick Charge compatible devices including iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE, Google Pixel4/3XL, LG G7 / V50, AirPods Pro, Switch, 11”/ 12.9” iPad Pro, iPad Air (3rd Gen), iPad Mini (5th Gen), AirPods Pro and more
AUKEY PA-B1 20W PD Wall Charger
18 Months Local Warranty from AUKEY Myanmar
White K31,950.00 Black - Sold Out